युगसम्बाद साप्ताहिक - त्यसबेला हामी लण्डनमा बसेर नेपालमा आगो बाल्छौं
Wednesday, 01.29.2020, 03:19pm (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 09.23.2014, 05:54am (GMT+5.5)
- ज्ञानराज राई, गोर्खा आन्दोलन अभियान्ता
० यो अभियान कहाँ पुग्यो ?
यो अति चरम र अति संकटकालीन अवस्थामा छ । मलाई लाग्छ अबका केही दिन केही महिनाभित्र गोर्खालीहरूले न्याय प्राप्त गर्नेछन् । गोर्खालीको अधिकारका निम्ति सुरु गरिएको अभियान टुंगोमा पुगेरै छाड्छ । हामीले लण्डनमा गरेको गोर्खा सत्याग्रहले बेलायती सरकार त्यहाँको संसद र जनताले गोर्खालीमाथि बेलायतबाट कति अन्याय भएको रहेछ भन्ने थाहा पाएका छन् । अब बेलायत सरकारले त्रिपक्षीय सन्धिको मुल मर्म र भावना अनुरुप काम गर्ने तत्परता देखाइसकेको छ ।
० अभियानका लागि बेलायतमा के के गर्नुभयो ?
भनि साध्य छैन । दशौं हजार गोर्खाहरूलाई समेटेका छौ । उनीहरूको मर्म भावना अनुसार हामीले हस्ताक्षर संकलन ग¥यौं । त्यहाँ गोर्खाहरूले हातले मात्र हस्ताक्षर गरेनन् धरधरी रुँदै आँसुले पनि हस्ताक्षर गरे । हामीले सयौं बेलायती सांसदलाई भेटेका छौं । बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन, निक्ल्यास जस्ता राजनेताहरूसँग पनि यस विषय छलफल ग¥यौँ तर समाधान निस्केन । यसरी समाधान नआएपछि हामीले पनि गोर्खाली भोकभोकै भएको, हजारौ सन्तान टुहुरा टुहुरी भएको देख्नसक्ने अवस्था थिएन । अनि महात्मा गान्धीलाई सम्झयौ र सत्याग्रह शुरु ग¥यौँ ।
० बेलायत सरकारले गोर्खालीहरूलाई के के अन्याय गरेको छ ?
बृटिस रक्षा मन्त्रालय मात्र नभई बृटिस विग्रेडज अफ ग्याङ छ । उनीहरू नेपालका आदिवासी जनजाती राई, लिम्बु, मगर गुरुङहरूको रगत पसिना चुस्न पल्केका छन् । उनीहरूको सामाजिक आर्थिक हिसाबमा हस्तक्षेप गर्न लागिपरेका छन् । यो कुरा त्यहाँको शासकलाई पनि धेरै ढिलोमात्र थाहा भयो । अहिले ढिलै भए पनि त्यहाको बौद्धिक जमातले यो कुरा बभ्mयो । नेपालमा रहेको जातीय समस्याहरू साम्राज्यवादीले गर्दा भएको भन्ने उनीहरूको बुझाई छ । उनीहरूले गोर्खाले गरेको कामको क्षतिपूर्ति अब पैसा दिएर मात्र पुग्दैन भन्नेमा सहमत रहेका छन् ।
० बेलायत सरकारबाट गोर्खाली समुदायले अधिकार पाउनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
विश्वास नभएको भए त नेपालमा आएर यत्रो अभियानको कार्यक्रम नै गर्ने थिएनौं नि । आजै हामीले गोर्खाली परिवारका सभासदलाई भेटी स्वतन्त्र समिति बनाएका छौं । बेलायतमा समेत त्यस्तो समिति बनिसकेको छ । अब नेपालका सभासद र बेलायतका सांसदबीच गोर्खाली समुदायका बारेमा छलफल गराउन तथा नेपालको संसदलाई गोर्खाहरूको समस्याको बारेमा बुझाउन सहज हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । नेपालको संसदको २०५५ सालमै गोर्खा समुदायका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर बेलायती सरकारलाई समेत बुझाएको छ । त्यो प्रतिवेदन पुर्णरुपमा लागु हुनपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर बेलायतमा समेत गोर्खाहरूलाई हेर्ने समितिलाई ठुूलो दबाब छ । त्यसकारण उनिहरूले गोर्खालाई केही आवश्यक सेवा सुविधा थपेर मुखमा बुझो हाल्ने काम गर्न सक्छन । यस्मा हामी सचेत हुन आवश्यक छ । त्यसो भयो भने देशलाई अर्बौंको.घाटा हुने छ ।
० नेपालमा तपाईहरूको अभियान केमा केन्द्रित हो ?
गोर्खाको समस्या भनेको नेपाल सरकारको समस्या हो । मैले अघि पनि भने यसले राई, लिम्बु गुरुङ, मगर समुदायको सामाजिक र सास्कृतिक संरचना बिग्रीएको छ । यो समुदायले न्याय पाउँदा उनिहरूलाई मात्र होइन मुलुकलाई नै राहत हुन्छ । राहतले सामाजिक सदभावमा समेत टेवा पुग्छ । साम्रज्यवादले गरेको कुराको समेत निराकरण हुन्छ । ठाडो भाषमा भन्ने हो भने यहाँ बाहुनले बिगारेको होइन बिगार्ने साम्राज्यवाद हो । बिचरा बाहुन त साम्राज्यवादको पछिपछि लागेको हो । साम्रज्यवादीले मारेको सिनो खाने मात्र हो ।
० अभियानमा क्रममा प्रतिकृया कस्तो पाउनु भयो ?
भेट्नुपर्ने निकाय र व्यक्ति सबैलाई भेटेको छौं । भेटमा सबैले सहयोग गर्ने अश्वासन दिनुभएको छ । नेपाल सरकारले पहिलो पटक इतिहासमा ऐतिहासिक काम गर्दै बेलायत सरकारलाई पत्र नै लेखेर गोर्खाहरूले बृटिस नागरिक सोसरह सेवा सुविधा र पाउनुपर्ने दबाव दिएको छ । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम भएको छ ।
० मतलब पहिलो चोटी नेपाल सरकारको आँखा खुल्यो ?
हो, लण्डनमा हामीले परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्यौँ । उहा एकदमै सकारात्मक देखिनु भयो र तत्काल नेपाल फर्केपछि बेलायत सरकारलाई पत्र लख्दै २०५५ सालमा तयार भएको नेपालको ससंदीय प्रतिवेदन समेत पठाएर सहयोग गर्नुभयो । अहिले हाम्रो टोलिले प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालालाई भेट्यौ । उहाँले यस्तो अमानविय काम पनि हुन्छ भन्दै बेलायत सरकारसँग आवश्यक पहलकदमी लिने आश्वासन दिनुभएको छ । हामीले प्रधानमन्त्रीसँग १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार नेपालीलाई लाहुरे बनाएर नेपाल सरकारले पठाएको हो । सन्धिमा जुन देशको नागरिकलाई सैनिक बनाएर राखिन्छ उसलाई आफ्नै देशको नागरिक सैनिक सो सरह सेवा सुविधा दिनुपर्छ । त्यो सन्धि भएको मितिदेखि हालसम्मको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हाम्रो माग छ । सम्झौता भएको कुरालाई वास्ता नगरी हामीलाई भाडाको टट्टुको भन्दै काम गराएर खाली खुट्टा बनाएकोले यसकाल ागि हामीले यो अभियानलाई आन्दोलनको रुपमा अगाडी सारेका हौँ ।
० तपाईहरूले विशेष अधिकार भन्नुभएको छ त्यो के हो ?
नम्बर १ पेन्सन गोरासमान हुनुप¥यो । त्यो पेन्सन भर्ना भएको मितिदेखि गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारले पाउनु प¥यो । दोश्रो जति गोर्खा सैनिकहरूलाई भाडाको टट्टु बनाएर खाली हात पठाइयो जसले गर्दा परिवार भाँडियो, समाजिक सदभावहरू बिथोलियो, सन्तान शिक्षाबाट बञ्चित भए उनीहरूलाई क्षतिपुर्ति दिनका लागि विशेष अधिकार मागिएको हो ।
० नागरिकताको सवाल पनि उठेको छ नि ?
हामी त्रिपक्षीय सन्धिको आधारमा बेलायत सरकारको नोकरी गर्न गएका हौं । हामीले त्यहाँ गएर नेपाल र ब्रिटेनकोबीचमा पुलको काम गरिरहेका छौ । अहिले हामीले त्यहाँको नागरिकता लिएनौं भने धेरै अधिकार गुमाउनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ बेलायती नगरिकता लिँदा हामी हाम्रो नेपालको जन्मसिद्ध अधिकार पनि गुमाउन चाहदैनौ । तर, नेपालको कानुनले दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरेको छैन । तसर्थ हामीले सरकारसँग नागरिकताको निरन्तरताको माग गरेका हांै । अहिले एशियन गेममै के भयो ? त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार नै भारतिय सेनामा कार्ययत संखुवासभाका जीतु राईले भारतका लागि एअर पेस्तोलमा स्वर्ण पदक जिते । हो यो अवस्था भएकाले हामीले गोर्खा समुदायलाई विशेष सुविधाको माग गरेका हौ ।
० भनेपछि सरकारले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गनुपर्ने भो ?
दोहोरो नागरिकता होइन नागरिकताको निरन्तरता भनेका हौं । यदि सरकारले यो व्यवस्था नगरेमा लाखौं गोर्खाली समुदाय आफ्नो श्रीसम्पति बेचेर बेलायत पलायन हुनेछ । यस्ले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पुग्ने छ । तर हामीले नागरिकता निरन्तरता गर्ने हो भने आफ्नो थाक थलो छोडेर कोही जाँदैनन् बेलायतमा कमाएर नेपालमै आउँछ । त्यसो हुनाले पनि नागरिकता खोसिनु हुँदैन । अर्को कुरा नागरिकता निरन्तरता नगर्ने हो भने गोर्खाली समुदायसँग जोडिएर नेपालमै रहेको परिवार राज्य र सरकारप्रति नकरात्मक हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक द्वन्द्व त हुन्छ नै साम्प्रादायिकता समेत भड्किन सक्छ । तसर्थ सरकारले पहिले जस्तो यिनीहरू मुगलान बसुन हामी मात्र यहाँ बसेर राज गर्छौ भन्ने विषय सोच नराखी नयाँ ढँगले निर्णय गर्नुपर्छ । सिधा कुरा हाम्रो नागरिकता खान पाईदैन । त्यो खायो भने राज्यले भोलि त्यसको नतिजा ब्यहोर्छ ।